Vana Vadiki Votadza Kuwana maARVs
HARARE — Vana vazhinji vanoberekwa vaine HIV muZimbabwe, kunyanya vanogara kumaruwa, vanonzi vari kutadza kuwana mishonga yema Anti Retroviral Drugs, ARVs, nekukurumidza nepamusana pekushaya mishina inovheneka ropa ravo mushure memasvondo matanhatu vaberekwa.
Mishina inokwanisa kuvheneka ropa revana ava inonzi iri kuwanikwa chete muzvipatara zvepamusoro munyika, izvo zviri kutadzisa nyika kuti iwanise vana vose mishonga iyi munguva inokurudzirwa nenyanzvi dzezvehutano.
Nyanzvi idzi dzinotiwo kushaikwa kwemishina iyi kumaruwa, kuri kupa kuti huwandu hwevana vanofanirwa kunge vachiwana ma ARVs, hudzikire zvikuru, asi vanoda mishonga iyi vakawanda zvikuru.
Mukuru wechirongwa che HIV/AIDS and Tuberculosis mubazi rezvehutano, Doctor Owen Mugurungi, vanoti vana vari kuwana mapiritsi ema aya vashoma kana zvichienzaniswa nevakuru.
Doctor Mugurungi vanoti vanhu vakuru vanosvika mazana mashanu nemakumi masere ezviuru, vari kuwana ma ARVs pasi pechirongwa chehurumende, ukuwo vana vanosvika zviuru makumi mana nezviviri chete, ndivo vari pamishonga iyi.
Doctor Mugurungi vanoti huwandu uhu hushoma sezvo zvikamu makumi mashanu nezvisere kubva muzana zvevana ava, zvisiri kuwana mishonga iyi.
Dr Mugurungi vanoti vana vanoberekwa vaine HIV vanga vasiri kuwana mishonga nekurumidza sezvo munyika manga musina hurongwa hwekuti vana vari pasi pemakore maviri, vavhenekwe ropa ravo kuti rionekwe kana riine hutachiona.
VaMugurungi vanoti vana vadiki vanga vachifa sezvo panga pasina hunyanzvi hwekuvavheneka ropa ravo vachiri pasi pemakore maviri, izvo zvanga zvichiita kuti vakure vaine hutachiwona asi vasina mishonga yekunwa.
Vanotiwo kunyange hazvo pave nehunyanzvi mukuvhenekwa kwevana vadiki, dambudziko riripo nderekuti kushaikwa kwemishina iyi mumakiriniki ekumaruwa, kuchaita kuti vana vakawanda varambe vachitadza kuwana mishonga iyi nenguva, izvo zvinozovhiringa hutano hwavo.
Imwe nhengo musangano reBatanai HIV/AIDS Organisation, VaJoshua Mavhundu, vanoti hurumende inofanirwa kuisa mari yakawanda muzvirongwa zvakadai zvinopa hupenyu kuvana.
VaMavhunda vanoti vana vazhinji vari kufa, kunyanya kumaruwa, nekutadza kwehurumende kukoshesa nyaya dzezveutano.
Mumwewo chiremba anorapa vana, Dr Enoch Mayida, vanowirirana naVaMavhundu kuti vana vazhinji vari kufa kumaruwa sezvo michina nezvimwe zvinodiwa kuti vararame zvichingowanikwa mumadhorobha chete.
Dr Mayida vanoti vakawanda kumaruwa havana mari, nokudaro vanotadza kuenda kuzvipatara zvikuru kuti vanorapisa vana vavo.
Gurukota rezvehutano, Dr Henry Madzorera, vanotiwo michina yekuongorora vana hutachiona hwe HIV iripo zvekuti inogona kusvika kumaruwa. Asi VaMadzorera vanoti nyaya iri kunetsa ndeyekuti vamwe vana chiremba nana mukoti havasati vave kugona kushandisa mishina iripo.
Dr Madzorera vanoti gore rino hurumende iri kuita zvirongwa zvekudzidzisa vana chiremba, nana mukoti nevamwe kuti vakwanise kushandisa michina iyi kuitira kuti vekumaruwa vabatsirikanewo.
Dr Mugurungi vanoti kunyange hazvo makiriniki nezvipatara zvidiki zvisina michina iyi, kanawo nyanzvi dzinogona kushandisa mishina iyi, makiriniki anokwanisa kuendesa ropa revana ava kuzvipatara zvepamusoro kuitira kuti rinoongororwa nguva ichiripo.
Kudzamara izvi zvoitwa nemazvo, vagari vekumaruwa vacharamba vachinetseka nehutano hwevana vavo nepamusana pekunonoka kwezvinhu zvinokosha kusvika munzvimbo dzavanogara.